Rindrambaiko maloto 39 tapitrisa no nesorina tao amin'ny Play Store | Androidsis
Ny Play Store dia nanala fampiharana mampidi-doza 39 tapitrisa
Eder Ferreno | | fiarovana, Tutorials
Ny fiarovana ny Android dia voataona matetikas. Nandritra izay taona lasa izay dia vitsy ny malware na karazana fandrahonana hafa atahorana hampidi-doza ny mpampiasa. Na dia miasa betsaka aza i Google amin'ity lafiny ity. Raha ny marina, fandrahonana maro no tsy mahavita mametraka loza amin'ny mpampiasa azy. ankehitriny Nambara ny isan'ny fampiharana mampidi-doza nesorina tao amin'ny Play Store.
Google Play Protect no tetikasa izay nanantenan'ny orinasa amerikana fanatsarana ny filaminana ao amin'ny Play Store. Misaotra an'ity fitaovana ity Rindrambaiko mampidi-doza 39 tapitrisa no tsikaritra ao amin'ny fivarotana app.
Ankoatra izany, nesorina teo no ho eo ireo fampiharana rehetra ireo. Ka tamin'ny voalohany dia toa tsy nisy olana lehibe ho an'ireo mpampiasa izany. Na dia hitantsika aza fa misy ny fandrahonana ary mahomby io karazana fampiharana io midira mora foana ao amin'ny Play Store.
Google Play Protect dia manisa fampiharana manodidina ny 50 tapitrisa isan'andro. Izy io dia fitaovana iray miasa amin'ny fahombiazana lehibe, satria be dia be ny isan'ny fampiharana ao amin'ny magazay. Ka zavatra iray izany manampy betsaka rehefa miady amin'ireo rindranasa ratsy ireo. Raha tsy misy an'io fitaovana io dia hihabe ny olana.
Na dia hitantsika aza fa ny malware dia ny olana lehibe atrehin'ny Play Store. Noho izany Google dia manana asa betsaka hatao amin'io lafiny io. Na dia nanao dingana tamin'ny lalana tokony haleha aza ny orinasa. Ny iray amin'izy ireo dia tsy isalasalana fa mampiasa Google Play Protect. Araka ny Noho ny fianarana milina dia 60% -n'ireo fampiharana maloto no voamarika.
Ankoatra izany, antenaina hitombo io tarehimarika io satria manatsara sy mianatra fiasa vaovao ilay fitaovana. Ka na dia somary miadana aza ny dingana, toa tena misy ny fanatsarana ny fiarovana. Na dia mbola lavitra lavitra an'i Apple aza i Google amin'ity lafiny ity. Saingy, marina ny adiresy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Ny Play Store dia nanala fampiharana mampidi-doza 39 tapitrisa
Misy malware izay mbola ao amin'ny fivarotana: ES Parallel Account
Ny Blackshark, finday Xiaomi mety ho an'ny mpilalao dia mivoaka ao amin'ny Geekbench